20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nevavengi vepamberi | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nevavengi vefambiro mberi
20 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nevavengi vefambiro mberi
Isaya 8: 8-10:
8 Iye achapfuura napakati paJudha; Iye uchawanda, uchapfuura, uchasvika pamutsipa; uye anotambanudza mapapiro ake achazadza upamhi hwenyika yako, Iwe Imanueri. 9 Batanidzai vanhu, uye muchavhuniwa; inzwai, imi mose nyika dziri kure; zvisungei zviuno, muputswe; zvisungei, uye muchavhuniwa. 10 Ranganai, muve pasina; Taura shoko, uye haringamiri, nekuti Mwari anesu.
Vavengi vekufambira mberi ndehwechokwadi. Izvi ndizvo vanhu vanotyisidzirwa nekubudirira kwako, ivo havana kugadzikana paunenge uchifambira mberi muhupenyu. Vavengi vekufambira mberi vanhu vari kushanda nemweya wevaroyi, mweya weuroyi mweya wekudzvinyirira, mweya uyu hautenderi chero murume kusvika pamusoro. Iwo mweya wehun'anga mweya yemweya wehurombo. Ichagara ichidhonza iwe shure uye pasi. Asi runako ndirwo, paunobata izvi makumi maviri zvehondo munamato mapoinzi pamusoro pavavengi ve kufambira mberi, Mwari wekutsiva uchamuka uye uchaparadzira vavengi vako vese.
Iyi yehondo manamato manongedzo achakupa simba rekurwira nzira yako kuenda kumusoro. Kuti ufambire mberi muhupenyu unofanirwa kurwira kurwa kwekutenda. Nekuti isu tinorwa nehunyanzvi hwakamira munzira inoenda kune ramangwana rakajeka, tinofanira kuvadzivisa pakushanduka kweminamato yehondo. Tinofanira kusimuka torwira hondo yerusununguko rwedu uye kufambira mberi kwakanyanya muhupenyu. Sezvo iwe uchiita izvi zvehondo munamato manzwi vavengi ve kufambira mberi, ini ndinoona vavengi vako vese vachipfugama tsoka dzako muzita raJesu amen.
1. Rega zvakashata zvirongwa zvevavengi veenderera mberi nehupenyu hwangu zviitwe zvisina basa, muzita raJesu.
2. Ndinoraira kuti madhimoni ese aiswe muhupenyu hwangu kubudikidza nevavengi vepamberi kuti adururwe neropa raJesu, muzita raJesu.
3. Rega munhu wese akashata werima akatarisana nekuparadza chiono changu, zviroto nehushumiri ngaigamuchire kuora moyo, muzita raJesu.
4. Rega dhimoni roga roga rakanangana nehupenyu hwangu ripwadzwe, muzita raJesu.
5. Ini ndinoraira zviitiko zvese zvechidhimoni kupokana nekudaidzwa kwangu kuti ndiwane kunyadziswa uye nyonganiso, muzita raJesu.
6. Chero rakaipa gangup rinopesana nehupenyu hwangu uye destiny, moto weGidhi uvaparadze muzita raJesu.
7. Baba ishe, regai hupenyu hwangu, hushumiro uye hupenyu hwemunamato huve nengozi zvakanyanya kuhumambo hwerima, muzita raJesu.
8. Baba, rega chirongwa chose chevavengi vemberi chekundidhonza chishandiswe uye chisina, muzita raJesu.
9. Baba Ishe, ndiratidzei unyoro husingaenzaniswi uye nenyasha zuva nezuva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
10. Baba ishe, musatendera vavengi vebudiriro kumisa mabasa angu ekunamata epanyika, asi ndibatsireiwo kuzviita, muzita raJesu.
11. Ishe wangu uye Mwari wangu, simudza vanyoreri kuti vamire munzvimbo yavo nguva dzose, muzita raJesu.
12. Baba ishe, itai kuti zvipo zvese zveMweya zvepamusoro uye matarenda muhupenyu hwangu atange kushandira kubwinya Kwenyu, muzita raJesu.
13. Ini ndinoramba kuchema kusingadzoreki, kushungurudzika uye kuzvidemba, muzita raJesu.
14. Baba ishe, ndibatsireiwo kuitira kuti zviga zvangu zvekunamata zvisaendeswa kune mumwe munhu, muzita raJesu.
15. Ndinoraira masimba ese akasarudzika erima achipesana nehupenyu hwangu kuti aparadzwe nemheni nekutinhira, muzita raJesu.
16. Vavengi vese vechidhimoni vekufambira mberi kupokana neshungu dzangu dzekunamata nedzemweya, nyadziswa, muzita raJesu.
17. Ini ndinoraira magirazi ese echidhimoni uye nekutarisa gadget pamhepo yangu yemweya kuti ipwanye, muzita raJesu.
18. Rega madhimoni vamiririri uye vanoshanda nesimba varikumisidzana neupenyu hwangu vagamuchire kuparadzwa, muzita raJesu.
19. Regai madhimoni nevamiririri vanorwa vachirwisa hupenyu hwemitezo yemhuri yangu vagamuchire kuparadzwa, muzita raJesu.
20. Baba, ndinoparidza kuti ndichaona kunaka kwenyu munyika yevapenyu, muzita raJesu.
Tenda Mwari baba nekunyadzisa vavengi vangu.
Previous nyaya20 Hondo dzeMunamato Pfungwa dzeDziviriro uye Dziviriro
inotevera15 minamato manongedzo inopesana nemidzimu inodzivisa
Rapi Mbudzi 28, 2020 At 6:20 am
Mhoro si jeni shpi Albania Tirana besnik rapi Patsor rrapibesnik@mail.Com
7 Zuva Kutsanya uye Munamato wekuvhura Mikova dzakavharwa
20 Simba Rinamato rekuporesa Shamwari